DIY: Fomba maodely ataovy samirery • World Model
———- PEJY ———-
Modely momba ny toetr'andro
Torolàlana momba ny maodely
Atrikasa: miaraka amin'ny maodely A ka hatramin'ny Z
Fitsapana sy fampisehoana
Gallery ny asa vita
DIY: fanaovana modely DIY
Aiza no hividy
Sokajy: DIY: fanaovana modely DIY
Ny lamba famaohana mosara sy ny labasy - fanampiana mahomby amin'ny diorama
Amin'ity indray mitoraka ity dia Soso-kevitra haingana avy amin'i Szymon Pasternak - fomba tsotra sy mahomby amin'ny lamba, labasy ary fanahafana fitaovana mitovy amin'izany ho an'ireo diarama sy maodelinay. Tsaroantsika - diorama, vignette, na modely tokana aza manintona, dia matetika noho ny tsiro sy ny antsipiriany fa tsy ny fahaizan'ilay maodely mihitsy. Ny kinova plastika vita amin'ny plastika matetika nampiana modely, ...
Manasa anao izahay amin'ny fidirana voalohany amin'ny sokajy vaovao - DIY: Ataovy maodely izany. Amin'ity fizarana ity dia manolotra gadget sy fitaovana vita an-trano ilaina ho an'ny modely sy ny mpankafy DIY izahay. Voalohany indrindra - Paint Shaker na "shaker (matotra?) Ho an'ny loko". Jereo hoe amin'ny fampiasana fitaovana malaza - jigsaw, ahintsano ary afangaroy tsara ny loko sy ny simika modelyo. Avy…
"Paleta mando" - manampy amin'ny hosodoko amin'ny akrilika
Ny sary hosodoko amin'ny borosy misy akrilika hosodoko, izany hoe hosodoko mahazatra ho an'ny mpanamboatra modely, dia miteraka olana iray - te handatsaka eran-tany vitsivitsy izahay handokoana zavatra iray, fa ny loko narotsaka tamin'ny sarom-bilany kosa maina vetivety, matevina ary tsy maintsy ampiharintsika indray. rehefa afaka fotoana fohy. Zava-dehibe indrindra ny olana raha nifangaro loko ka tsy maintsy mametraka roa na ...
Ny fivarotanay amin'ny Allegro SMART!
Sandam-bola	 EUR	GBP	USD	PLN
Miasa 09-17 izahay amin'ny faritr'ora UTC + 01: 00 / UTC +02: 00
Mandefasa mailaka amin'ireto adiresy manaraka ireto:
Fanpage Fb anay
© 2021 Modeling World. Namboarina tamin'ny alàlan'ny WordPress sy ny Lohahevitra Mesmerize